4 | Agile Scrum मास्टर प्रमाणीकरण «ITS Training
4 | आगिल र स्क्रोम मास्टर प्रमाणन
Scrum मा प्रमाणपत्र, Agile प्रोग्रामिंग को लागि मुख्य प्रणाली
Agile Scrum मास्टर ट्रेनिंग कोर्स
1। प्रमाणित स्केम मास्टर
ScrumMaster पुष्टिको फाइदाहरू के हुन्?
ScrumMaster पुष्टिको लागि आवश्यकता
तपाईं CSM प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि के गर्नुहुन्छ?
2। Agile Project Management-Practitioner
3। Agile Project Management
4। आगिल र स्क्रोम
स्क्रम तयार गर्दै र प्रमाणपत्रले साथीहरूको बीचमा बढी प्रमुख समन्वय प्रयास, लाभप्रदता, र उपलब्धिलाई प्रोत्साहन गरेर आगो बयानको दृष्टिकोणलाई पूर्ण तुल्याउँछ। यो विश्वव्यापी विकास परिवर्तन संघहरू र तिनीहरूलाई अधिक उच्च मात्रामा कार्यान्वयनमा लिन्छ।
एक प्रमाणित ScrumMaster ® उद्यम समूहहरू वैध रूपमा स्क्रिम प्रयोग गर्छन्, उद्यमको सामान्य उपलब्धिको सम्भावना सुधार। सीएसएमहरू स्केम गुणहरू, अभ्यासहरू र अनुप्रयोगहरू बुझ्छन् र सामान्य उपक्रम प्रमुखहरूको जानकारी र क्षमताको स्तर प्रदान गर्छन्। सीएसएमहरूको बारेमा "अग्रगामी सेवाकर्ता" को रूप मा जाने को बारे मा जान्छ, जो केहि संग स्के्रम सहयोग को छोड दिए को मदद गर्दछ र स्क्रम संरचना मा ले जान्छ। त्यसै गरी CSM हरू समूहलाई अन्डर र बाहिरको विविधताबाट ढाल गर्दछ। ScrumMaster भाग को बारेमा अधिक प्रयुक्त र एक ScrumMaster को एजेन्डा को मामला हेर्नुहोस।
एक प्रमाणित स्क्रैस्टरमेस्टर® को खरीद गरेर तपाईं पुष्टि:
आफ्नो पेशा उद्घाटन जारी राख्नु र आकर्षक उद्योगका सबै क्षेत्रहरूमा आगिल प्रविधिहरू गम्भीर रूपमा विकास गर्नुहोस्।
व्यवसाय र साथीहरु लाई प्रदर्शनी को आफ्नो केन्द्र को केन्द्र स्क्रम सिकन को प्रदर्शन।
Scrum को स्थापना मा र प्रमाणित ScrumMaster को स्केम मा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्वहरु को भाग को भाग ले लो।
कथित स्केम विशेषज्ञहरु को एक समूह संग ड्राओ जो निरंतर परिवर्तन मा केंद्रित हुन्छन्।
सीएसएमको रूपमा, तपाईंसँग स्क्रोममेस्टर वा स्क्र्रम सहकार्यको भाग भर्न सक्ने क्षमता हुनेछ। पुष्टि प्रक्रियाको माध्यमबाट, तपाईं स्क्र्रम प्रणालीको समक्ष उठाउनुहुनेछ, सामूहिक समूहहरू, अभ्यासहरू, र कुरियो सहित।
तपाईंको CSM पुष्टिकरणको साथ, तपाइँसँग पनि 2-वर्ष नामांकनको लागि स्क्रिम एलायंसको लागी दावी छ। यस सहभागिताको माध्यमबाट तपाइँ पड़ोस क्लाइन्ट बन्चहरू, अनलाइन अनौपचारिक संस्थाहरूमा सामेल हुन सक्नुहुनेछ, सामाजिक घटनाहरूमा गहन छूट र अतिरिक्त अंश मात्र सम्पत्तिहरू। यसबाहेक, सीएमएमहरूले उनीहरूको प्रमाणपत्रलाई हाइलाइट गर्न विशिष्ट बनाइएको लोगो प्रयोग गर्न सक्छन्।
तपाईंको CSM प्रमाणपत्र जित्नको लागि, तपाईंले एक प्रमाणित स्केम ट्रेनर (सीएसटी) वा अनुमोदित स्केम प्रशिक्षक (एटीटी) बाट CSM पाठ्यक्रम लिनु पर्छ र आफ्नो अग्रिम हाम्रो अनलाइन CSM परीक्षामार्फत देखाउनुहोस्।
तपाईंको CSM तिर सुरुवात कदम आफैलाई स्क्र्रम संग परिचित छ। हामीले सम्पत्तिको बहुउद्देश्य वस्तुको आदेश दिएका छौं जुन तपाईले कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ कि कसरी स्क्र्रमले ब्रह्मांडको प्रकार्य परिवर्तन गर्दछ।
त्यस बिंदुमा अनुहारमा दुई-दिन (एक्सएनएनएक्सएक्स घण्टा) सीएसएम कोर्स एक स्केम एलायंस प्राधिकृत प्रशिक्षक द्वारा निर्देशित छ। प्रभावकारी ढंगले परिष्कृत भएपछि, तपाईंले CSM परीक्षा पास गर्नुपर्दछ। एक गुणा स्कोर प्राप्त गर्न, तपाईले 16 प्रश्नहरूको 24 सही जवाफ दिनैपर्छ। तपाईं 35 स्केम शिक्षा इकाइहरूको लागि यस पाठ्यक्रमको अन्तहीन आपूर्तिको लागि योग्य हुनुहुनेछ।
तपाईंले CSM परीक्षा पास गर्नुभएपछि, तपाईंलाई अनुरोध गरिएको छ कि इजाजतपत्र सम्झौतालाई स्वीकार गरी तपाईंको स्क्र्रम एलायंस नामांकन प्रोफाइल पूरा गर्नुहोस्।
अलग अघिल हुनु हो एक लामो समयसम्म चल्ने भ्रमण हो। तपाईंको ब्रह्माण्डको काममा स्केम मानकहरू र प्रविधिहरू स्थिरता, निरन्तरता, र निरन्तर परिवर्तनको प्रतिज्ञा लिन्छ। थप रूपमा तपाईंको अन्तर्दृष्टि र कमजोरीलाई सुधार गर्नुहोस्:
एक ग्राहकलाई जोड्दै।
हाम्रो साइट मा एक लेख योगदान गरेर स्क्र्रम गठबंधन मान्छे समूह को आफ्नो अनुभव को प्रतिपादन।
स्क्रम एलायंस गठबन्धनमा जाँदै।
CSM LinkedIn समूहमा भाग लिँदै।
जितेको पात्रतालाई कटौती गरेर कट्टर स्क्रिम विषयवस्तुहरूमा तपाईंको अन्तर्दृष्टिको विकास गरिँदै।
एक प्रमाणित स्केम प्रोफेशनल (सीएसपी) को स्पष्ट गर्न को लागि अनुभव र कौशल उठाओ।
CS_INSTRUCTION प्रमाणपत्र, CSM लोगो, र स्क्रिम एलायंस साइटमा एक गतिशील, संपादन योग्य प्रोफाईलका साथ आफ्नो उपलब्धिहरूको बारे अरुलाई बताएर विज्ञापन दिनुहोस्।
एपीएमजी-अन्तर्राष्ट्रिय AgilePM® मान्यता भनेको अर्थ केन्द्रित पर्यावरणमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न को लागी उत्प्रेरित हुनु पर्छ।
फलफूल एरिलेन्ट कन्भेन्सनको लागि प्रदर्शन प्रक्रियाको साथ अनुकूलतालाई जोड दिनुहोस्।
Agile व्यापार कंसोर्टियम संग सहयोग मा हाम्रो AgilePM दिशा, पृथ्वी को तल र एक दोहोरी प्रक्रिया को पेशकश गर्दछ जो राम्रो उद्यम प्रबंधन को लागि आवश्यक gauges, thoroughness and comprehivability को बीच एक पूर्ण सदन को पूरा गर्दछ, र तेज गति, परिवर्तन र मजबूत ।
एटिले उद्यम व्यवस्थापन को एकाग्रता क्रमशः उद्यम समूह को आवश्यकताहरु लाई विकसित गर्न को लागी सफलतापूर्वक प्रतिक्रिया को लागि सशक्तिकरण बनाउन को लागी उपक्रम को लागी स्टाफ र विस्तृत संयुक्त प्रयास र स्वामित्व को सशक्त बनाइयो।
अगाइल परियोजना व्यवस्थापन के हो?
"जस्तै हो यो, हामी हरेक दिन उठ्छौं। हामी आगिल छौं। "
एक छिन। त्यसो भए तपाईले आफ्नो समूहलाई अलिकति बनाउन सक्नु भएको छ, यो एक सजिलो बुझ्न को लागी महत्वपूर्ण छ ???? र ???? एरिलेट भूमिका को एक भाग के हो ????? आगिल उद्यम व्यवस्थापन एक सम्मानित दृष्टिकोण हो जसले परियोजना प्रबन्धकहरुलाई उच्च आवश्यकता, उच्च ज्ञात काम गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। र उनीहरूको साझेदारहरूलाई डेगोग्स जस्तो देखिन्छ। यो एस एस कुनै पनि तरिका ट्राउजिङ, महंगा र गलती तरिकाले उद्यम प्रबंधन संग सम्झौता गर्न को लागी तरिका को रूप मा, जो एकदम लामो समय को लागि विरोधाभासी परिणामहरु लाई बताईएको छ।
प्रोग्रामिंग उद्यमहरू लगातार परिवर्तन गर्छन्। मोडमा ग्राहकहरूले परीक्षण-ड्राइभ चलाउन सक्नु अघि ग्राहकहरूले भरोसा राख्नु पर्ने बेलामा, ओभरहेड र लम्बाई ड्रेफरलले प्रायः उद्यमलाई झन्झट्याउँछ। Agile Project Management सुधारको बारेमा ढिलो भए तापनि परिवर्तनको बारेमा बारेमा छ। यो ???? s संग सुरु गर्न को लागी उत्तम व्यवसाय सम्मान संग तत्वहरु को बारे मा पहुंचाने को बारे मा, र दृढतापूर्वक लागत, समय र डिग्री को निरीक्षण गर्न को लागि लगातार डेटा।
अगाइल परियोजना व्यवस्थापनले सम्पूर्ण उद्यमको निर्माण आवश्यकताहरु को धेरै महीना-लामो चक्र अलग गरेर विभिन्न वस्तुगत गुणस्तर कम गर्छ, सम्पूर्ण वस्तु निर्माण र त्यस परीक्षण पछि धेरै आइटम दोष खोज्न सकिन्छ। बरु सानो, उत्पादन वस्तुको प्रयोगयोग्य भाग संकेत, सिर्जना गरी र उचित, दुई-चार-चार हप्ता चक्रमा प्रयास गरिन्छ।
परिवर्तन सुरू हुन्छ जब एक मनमान्यता हो जुन अवस्थित अवस्थाहरू विस्तार गर्न सकिन्छ जुन अपेक्षाको तुलनामा अन्य कुरा पूरा गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। ग्रह मा मनन को बहुमत र कुनै पनि मामला मा अधिकांश, कुनै पनि मौका नहीं हुनेछ कि तिमी त्यहि मौका फ्रिबल हुन को लागि सुरक्षित छैन। तपाईलाई नयाँ एथलीटहरू सिक्न आवश्यक पर्दछ र वृद्ध प्रक्रियामा पुरानो व्यक्तिलाई बेवास्ता गर्न समेत समावेश छ:
नयाँ विशेष क्षमताहरू, उदाहरणको लागि, परीक्षण रोबोटिकरण र योजना विकास
समूहको रूपमा विचार र काम गर्न चरण निर्देशनहरू द्वारा चरण
छोटो समयबाकस भित्र काम गर्ने प्रोग्रामिंग बनाउन निर्देशनहरू
चूंकि स्क्र्रम एरिलेट प्रक्रिया अनुकूलित प्रोग्रामिंग प्रगति को सम्बन्ध मा पर्याप्त रूप देखि अद्वितीय छ, स्थान निर्देश संग एक साथ तैयार गर्न को लागि या ट्यूटोरिंग सामान्य को आवश्यकता हो। धेरै संगठनों को लागि सबै भन्दा राम्रो काम को प्रतीत हुन्छ केहि अंतर्निहित तैयारी हो, स्क्र्रम को कोशिश गर्न को लागि तैयारता र यसको केन्द्र मानक को समझ को लागि केंद्रित।
यो सामान्य तयारी सामान्यतया त्यसपछि अभ्यास-विशेष तयारी वा शपथ संग पकडिएको छ, उदाहरणको लागि, नजिकको परीक्षण-संचालित सुधार मास्टर ल्याउनका लागि काम गर्नका लागि उनीहरूको कोडमा समूहहरूसँग।
माउण्टेन बाउ सफ्टवेयरले तयारी गर्दै र स्थान ड्रिलिंग प्रदान गर्दछ र तपाईंको समूहले अचम्म र स्क्रिममा सुधारको लक्षण देखाउँदछ। तयारी गर्न को लागी, संगठनहरूलाई एकअर्कालाई डेटा बेवास्ता गर्न समूहहरू खुल्ला (विकिस, आकस्मिक भोजन र सिक्न, क्रस-समूह ट्रेड) दिनु पर्छ।
माइक्रोसफ्ट निगम Azure पोर्टलको लागि नयाँ क्लाउड समर्थन घोषणा गर्दछ